दरवारमार्गमा खुल्यो मल्टिब्रान्डेड स्टोर जाम्बाला, नाफा जति सामाजिक सेवामा !
बुधबार, ११ फागुन, २०७३
काठमाडौं, फागुन ११ । काठमाडौंको दरवारमार्गमा रहेको क्यापिटल बिल्डिङमा एक्सक्लुसिभ ब्रान्डेड फेसन स्टोर ‘जाम्बाला एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट’ प्रालि’ खुलेको छ ।
१४ सय स्क्वायर फिटमा फैलिएको आकर्षक शोरुममा अन्तराष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त लक्जरी ब्रान्डहरुको सामान उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपालमै उच्चस्तरिय फेसन ब्राण्डका प्रोडक्टहरु चाहने उच्च वर्गका ग्राहकहरुलाई लक्षित गरेर शोरुम सञ्चालन गरिएको हो । यो स्टोरमा उच्च गुणस्तरका कपडा, ब्याग, जुत्ता, ह्याण्डब्याग, वालेट, पेटी लगाएतका सामानहरु पाइन्छ ।
शोरुमका प्रबन्धक पवन गुरुका अनुसार जाम्बाला एस्पोर्ट इम्पोर्ट प्रा.लि. एक गैर नाफामुलक संस्था हो जसले उच्च गुणस्तरिय ब्रान्डेड सामानहरु मात्रै बिक्रि वितरण गर्ने गर्छ । यसको संचालन र व्यवस्थापन कर्मा लेक्सेलि इन्ष्टिच्युसनले गर्ने गरेको छ । उनका अनुसार शोरुमबाट गरिएको शतप्रतिशत नाफा हिमाली क्षेत्रमा सहयोगको आवश्यकता रहेका बालबालिकाहरुको शिक्षा र स्वास्थको लागि खर्च गरिन्छ ।
स्टोरमा अन्तराष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त ब्रान्डहरु च्यानेल, लुइस भुइटोन, प्राडा, गुच्ची, फेरागामो, हम्र्स, बोटेगा भेनेटा, अर्मानी, वाइएसएल लगाएतका उच्च गुणस्तरका सामानहरु पाइन्छन् । शोरुममा महिला र पुरुष दुवैको सामानहरु लागि उपलब्ध छन् ।
शोरुमलाई काठमाडौं का एक पुर्ण उच्च स्तरीय सपिङ गन्तव्यको रुपमा विकास गर्दै सम्पुर्ण ब्रान्डेड कलेक्सनहरु एकै छाना मुनि उपलब्ध गराइएको कम्पनीले जनाएको छ ।
जाम्बाला स्टोरले फेसनलाई एक परिस्कृत रुपमा मानिसको जीवनसम्म ल्याँउदै एक आकर्षक व्यक्तित्व र स्टाइल प्रदान गर्ने बताउँदै प्रवन्धक गुरुङले भने, ‘यदि तपाई स्टोर सम्म पुग्नुभएको छैन् भने एक चोटी आएर चेक गर्नुहोस अनि तपाईले हाम्रा सामानहरु साँच्चै मन पराउनुहुनेछ ।’
कति छ म्यानचेस्टर सिटी क्लबका मालिकको सम्पत्ति ?
एजेन्सी । विश्वमा केही यस्ता धनाढ्यहरु रहेका छन् जो फुटबल खेलको निकै सौखिन रहेका छन् । कतिपय धनाढ्यहरु एउटै देशको मात्र नभइ अन्य राष्ट्रमा पनि फुटबल क्लब किन्ने गरेका छन् ।